“Ballon d’or 2012” – Fantaro ny momba ireo mpilalao enina mianadahy tafita amin’ny famaranana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
“Ballon d’or 2012” – Fantaro ny momba ireo mpilalao enina mianadahy tafita amin’ny famaranana
MATETIKA DIA TAKONA AO AORIAN’IREO MPILALAO LEHILAHY HAHAZO NY “BALLON D’OR” IREO MPANAZATRA SY MPILALAO VEHIVAVY MENDRIKA, MANDRITRA NY TAOM-PILALAOVANA IRAY EO AMIN’NY BAOLINA KITRA. MISY AMIN’IZY IRENY ANEFA NO EFA IMBETSAKA NO NAHAZO IZANY ANARAM-BONINAHITRA MANOKANA IZANY. FANTARO ARY NY MOMBA-MOMBA AZY IREO SY NY ZAVA-BITANY HATRAMIN’IZAY.
Ireo mpilalao lehilahy
Izy no tompon’ny “ballon d’or” farany teo
Mikendry ny handrombaka ny amboara faninefany amin’ity taona ity i Lionel Messi, izay efa nandrombaka ny “ballon d’or” tamin’ny 2009, 2010 ary 2011. Teraka tamin’ny 24 jona 1987 tany Rosario (Arzantina) i Leo Messi. Fony izy 13 taona no nanomboka nilalao tao amin’ny FC Barcelone hatramin’izao fotoana izao.
Ny tolotolotra sy ny famonoam-baolina no tena hain’ity teratany Arzantina ity. Saika nahafaty baolina hatrany izy tamin’ireo lalao rehetra natrehany, tao amin’ny FC Barcelone. Tamin’ireo lalao 352 nataony niaraka tamin’ny Barça dia niisa 283 ny baolina matiny. Takona anefa izany famirapiratany izany ao amin’ny ekipam-pirenena arzantina, izay mbola tsy nahazo ny amboara eran-tany hatramin’ny naha tao azy. Antonela Roccuzzo no anaran’ny fofombadin’i Leo Messi.
Ronaldo sy ny zanany
Mambabo ny fon’ny vehivavy ity mpilalao portogey ity ary mampiavaka azy ny volony, izay somary lava ny eo afovoany. Isan’ny fahalemen’i Cristiano Ronaldo io fitiavam-behivavy diso tafahoatra io. Teraka tao Funchal tamin’ny 5 febroary 1985 i CR 7, araka ny solon’anarana entiny ary zanaka olona sahirana tany Funchal izy. Efa manan-janaka lahikely i Cristiano Ronaldo saingy hatramin’izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra mazava ny renin’i Cristiano Jr.
Irakiraka mpanafika no toerana raisin’i CR7 ao amin’ny Real Madrid ary izany ihany koa any amin’ny ekipam-pirenena portogey. Mety aminy avokoa anefa ireo toerana rehetra eo amin’ny fanafihana ary tato ho ato dia saika nahafaty baolina hatrany izy. Hainy ny manafaingana tampoka ny hafainganam-pandehany ka tsy aharahan’ireo vodilaharan’ny ekipa mpifanandrina aminy. Efa nahazo ny “ballon d’or” izy tamin’ny taona 2008.
Inesta sy ny fianakaviany
Mpilalao be anaram-boninahitra indrindra amin’izy telo lahy mifaninana eo amin’ny “ballon d’Or” i Andres Iniesta, izay teraka tamin’ny 11 mey 1984, tany Fuentealbilla (Espana). Na eo amin’ireo mpilalao baolina kitra rehetra maneran-tany aza dia izy ihany koa no be amboara indrindra. Saika efa nandalo teny am-pelatanany avokoa ireo amboara eo amin’ny baolina kitra ankoatra ny Lalao Olympika. Tamin’ny 8 jolay 2012 teo no nahavitan’ny mariaziny sy Anna Ortiz ary efa manan-janaka vavikely izy ireo.
Ny tongony havanana no tena hainy mampiasa eo amin’ny filalaovana baolina kitra. Tolotolotra no tena mampiavaka azy fa tsy dia ny famonoam-baolina loatra. Tamin’ireo lalao 42 vitany tamin’ity taona 2012 ity niaraka tamin’ny Fc Barcelone dia baolina fito monja no matiny.
Ireo mpilalao vehivavy
Alexandra Patricia Morgan no tena anaran’ity mpilalao amerikanina ity. Ny 2 jolay 1989 no teraka tao Diamond Bar (Californie) izy. Lohalaharana no toerana misy azy ao amin’ny Sounders Women sy ao amin’ny ekipam-pirenena amerikanina. Mirefy 1,70 m i Alex
Morgan ary ny tongony havia no tena hainy mampiasa.
Tamin’ny lisitr’ireo mpilalao amerikanina niatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany tamin’ny taon-dasa dia izy no zandriny indrindra. Isan’ny tena nampamiratra azy ny baolina telo matiny ho an’i Etazonia nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’i Frantsa, teo amin’ny manasa-dalana ka nahatonga azy ireo teo amin’ny famaranana. Toy izany ihany koa tamin’ny manasa-dalan’ny Lalao Olympika 2012 tany Londres, efa tany amin’ny segaondra farany teo amin’ny fanalavam-potoana no nahafatesany baolina nampiakatra an’i Etazonia teo amin’ny famaranana.
Zokiny indrindra amin’ireo telo vavy hifantenana izay ho mpilalao mendrika i Abby Wambach, izay teraka tany Rochester tamin’ny 2 jona 1980. Indroa no niambozona medaly volamena teo amin’ny Lalao Olympika ity teratany amerikanina ity. Lohalaharana no toerana misy azy ao amin’ny MagicJack sy ny ekipam-pirenena amerikanina ary mirefy 1,80 m ravehivavy.
Tamin’ny taona 2011 dia voafidin’ny Associated Press ho atleta vehivavin’ny taona izy. Tany an-tsekoly dia efa tia nilalao baolina kitra i Wambach ary efa natetika no voahosotra ho mpamono baolina betsaka indrindra eo amin’ny fifaninanana natrehany. Nanomboka ny taona 2003 no voaantso handrafitra ny ekipam-pirenena izy ary tamin’ireo lalao 196 nataony dia baolina 148 no matiny. Raha lehilahy mihanahana dia tsy haharesy azy.
Marta Vieira da Silva Izy no azo heverina ho Pélé na Ronaldo, eo amin’ny baolina kitra vehivavy. Tany Doid Riachos (Brezila) no
teraka i Marta Vieira de Silva, tamin’ny 19 febroary 1986. Efa nahazo indimy nisesy ny amboara ho an’ny mpilalao mendrika indrindra eran-tany na “Ballon d’Or” i Marta (2006 – 2010). Lohalaharana no toerana misy azy eo amin’ny Tyresö FF sy ny ekipam-pirenena breziliana vehivavy. Efa tamin’ny 2004 no voaantso nandrafitra ny ekipam-pirenena breziliana i Marta ary mbola ao hatramin’izao fotoana izao. Hainy mampiasa avokoa ireo tongony roa eo amin’ny baolina kitra. Ankoatra izany dia mpilalao tenisy ihany koa i Marta ary tia mitendry gitara. Mpilalao tiany indrindra i Ronaldo sy Ronaldinho ary Rivaldo.
Soratra: Roméo Andriamihaja
Baolina kitra, Mpanoratra Rijakely, 07.01.2013, 16:42	FIARAHAMONINA